बेलासे बेपत्ता ‘भद्रगोल’का कलाकारको रुवाबासी ! - Arghakhanchi Saptahik
Home समाचार बेलासे बेपत्ता ‘भद्रगोल’का कलाकारको रुवाबासी !
काठमाडौं, चर्चित हास्य टेलिश्रृंखला ‘भद्रगोल’का निर्माता तथा कलाकार हुन्, सुबास कार्की ‘बेलासे’ । लामो समयसम्म गुमनाम रहेका उनी यही नामले रातारात चर्चित भए । उनले बोल्ने थेगो ‘तनावै तनाव छ, गोजीमा दुई रुपैयाँ छैन’ले त झनै धेरैलाई तान्यो । तर, रातारात चर्चामा आएका बेलासे यतिबेला गुमनाम छन् ।
अहिले उनी कता छन्, के गर्दैछन् रु स्वयं भद्रगोलको टिम समेत अन्योलमा छ । भद्रगोल टिमका एक सदस्य भन्छन्, ‘सुवास सर अहिले कता छन्, के गर्दैछन्, केही थाहा छैन ।’ रुखो स्वभावका कार्कीलाई भद्रगोल टिमले धुँइपत्तालसँग खोजे पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन, उनी कहाँ छन् भनेर ।
छोटो समयमै चर्चाको उचाई लिन सफल सिरियल भद्रगोल यतिबेला बन्द अवस्थामा छ । बन्द भएको नै करिब ८ महिना पुग्न लागिसक्यो । लामो समय सिरियल बन्द भएकाले कलाकारहरु उनको खोजी गरिरहेका छन् । तर, कार्की भने आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व समेत छाडेर लापत्ता छन् । स्रोतका अनुसार, कार्कीले कलाकारहरुको महिनौंदेखिको पारिश्रमिक दिन बाँकी छ । कलाकारहरु आफ्नो पारिश्रमिक पाउने आशामा लामो समय कुरेर बसेका भएपनि बेलासे पैसा दिनुको साटो उल्टै सिरियल नै बन्द गराएर बेपत्ता भएपछि कलाकारहरु तनावमा परेका हुन् ।
सम्पर्कमा हुँदा बेलासेले मिडिया हवले पैसा नदिएको भन्दै कलाकारहरुलाई झुलाउने गरेका थिए । तर, मिडिया हवका मालिका सोम धितालले भने आफूले कार्कीलाई पैसा दिएको दावी गर्ने गरेका छन् । यस्तो दावी गर्ने धिताल स्वयं पनि यतिबेला तनावमा छन् । हास्य सिरियल प्रसारण भइरहेको नेपाल टेलिभिजनलाई पैसा तिर्न नसक्दा बन्द भएपछि उनी तनावमा परेका हुन् । यद्यपि, उनले माघको पहिलो हप्तादेखि सिरियल पुनः प्रसारणमा आउने दावी गरेका छन् । साँघु साप्ताहिकबाट